वीरगञ्ज भन्सारबाट कसले ल्यायो ९० कन्टेनर केराउ ? जाचपास नै हुन सकेन - Nepalese Times
वीरगञ्ज भन्सारबाट कसले ल्यायो ९० कन्टेनर केराउ ? जाचपास नै हुन सकेन
नेप्लिज संवाददाता ४ श्रावण २०७८, सोमबार ०८:२८ (1 हप्ता अघि) १३४ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वीरगञ्ज भन्सारमा ठूलो परिमाणमा केराउ आइपुगेको छ । वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा ९० वटा कन्टेनरमा केराउ आइपुगेको सुक्खा बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
अरू ६० वटा कन्टेनरमा थप केराउ आउँदै गरेको अनौपचारिक जानकारी पाएको भन्सारका अधिकारीले बताएका छन् ।
हामीले भन्सार विभागमा पनि सोधेका छौँ, पेस गरिएका पत्रबारे वाणिज्यमा पनि बुझ्दै छौँ, अर्को आर्थिक वर्ष भएकाले माथिको निर्देशन नआइकन जाँचपास प्रक्रिया नै पूरा हुँदैन, भन्सार सूचना अधिकारी कट्टेलले बताए ।
सुक्खा बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत डा। लालबहादुर खत्रीले व्यवसायीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेकाले ९० कन्टेनर केराउ जाँचपास हुन नसकेको बताउँदै आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएसम्म जाँचपास नहुने बताए ।